प्रदेश १ मा थपिए २0७ कोरोना संक्रमित, ४४७ संक्रमित निको भएर फर्के — Sanchar Kendra
प्रदेश १ मा थपिए २0७ कोरोना संक्रमित, ४४७ संक्रमित निको भएर फर्के
विराटनगर । पछिल्लो २४ घण्टामा विराटनगरमा ५० सहित प्रदेश १ मा २ सय ७ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुँदा ४ सय ४७ जना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन् । डिस्चार्ज हुने सवै होमआईसोलेसनका रहेका छन् । हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या २० हजार २ सय २६ पुगेको छ भने संक्रमितको संख्या २४ हजार ९ सय ४१ पुगेको छ ।
मोरङमा ७१, सुनसरीमा ५७, संखुवासभामा ३४, झापामा २८, त्यहथुम र उदयपुरमा ३-३, इलाम र धनकुटामा २-२ र प्रदेश १ बाहिरका ७ जना रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । मोरङको विराटनगरबाहेक रतुवामाई र रंगेलीमा ५-५, ग्रामथान, कटहरी, सुन्दरहरैचा, केराबारी, बेलबारी र सुनबर्षीमा १-१ र स्थानीय तह नखुलेका ५ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको छ ।
त्यस्तै सुनसरीको धरानमा ३८, इटहरीमा १४, इनरुवामा ३, बराहक्षेत्र र कोशी गाउँपालिकामा १-१, संखुवासभाको खाँदबारीमा ३२, मकालु र सिलिचोङमा १-१, झापाको दमक र विर्तामोडमा ५-५, गौरादह, भद्रपुर, अर्जुनधारा र मेचीनगरमा ३-३, कनकाईमा २, बुद्धशान्ति, हल्दिबारी र कमल गाउँपालिकामा १-१ र स्थानीय तह नखुलेका १ जनाको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
उता त्यहथुमको म्याङलुङमा ३, उदयपुरको चौदण्डीगढीमा २ र उदयपुरगढीमा १, इलामको इलाम नगरपालिका र सुर्योदयमा १–१, धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकामा २, र प्रदेश १ बाहिरका ७ जनामा संक्रमण देखिएको छ ।
प्रदेश १ मा आज ७ सय ७४ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको छ । परीक्षण गरिएका मध्ये ७६ महिला र १ सय ३१ पुरुषको रिपोर्ट पोजेटिभ आएको हो । हालसम्म १ लाख ८२ हजार १ सय ३७ जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै आज पर्वतमा थप चार जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ । दक्षिण पर्वतको पैंयुका तीन र कुश्मा नगरपालिकाका १ जना गरी चार जना संक्रमित थपिएका हुन् । क्षयरोग उपचार केन्द्र पोखरामा गरिएको परिक्षणमा पैंयु गाउँपालिका ४ का दुई जना २६ र ६० वर्षका पुरुष तथा वडा नं. ५ का ५३ वर्षिया एक महिलामा संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
त्यसैगरी लाईफ केयर एण्ड डाईग्नोष्टिक प्रालि पोखरामा गरिएको परिक्षणमा कुश्मा नगरपालिका वडा नं. ८ चुवाका ४६ वर्षिय पुरुषमा पुष्टि भएको हो । संक्रमित सवै कन्ट्राक्ट ट्रेसिङवाट पुष्टि भएका हुन् ।
उनिहरु सवैलाई आईसोलेशनमा व्यवस्थापन गर्ने तयारी भैरहेको गण्डकी स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ ।
यो सँगै पर्वतमा संक्रमितको संख्या २ सय ७८ पुगेको छ ।